एउटै समयमा एकै अस्पतालका ९ नर्स गर्भवती! – Saurahaonline.com
एउटै समयमा एकै अस्पतालका ९ नर्स गर्भवती!
सौराहा अनलाइन | २०७६, ७ बैशाख शनिबार
एजेन्सी । अमेरिकाको मेइन अस्पतालमा कार्यरत ९ नर्सहरु एकसाथ गर्भवती भएका छन्। एकै अस्पतालमा कार्यरत उनीहरु एकै युनिटका हुन्। डेलिभेरी युनिटमा कार्यरत सबै सहकर्मी हुन् । आश्चर्य रुपमा उनीहरु एकैसाथ गर्भवती भएका हुन्। उनीहरुको बच्चा जन्मिने मितीसमेत लगभग उस्तै रहेको जनाइएको छ।
ओरिजन राज्यस्थित पोर्टल्यान्डमा रहेको मेइन अस्पतालका अनुसार आफ्ना अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरुले यसै वर्षको अप्रिल र जुलाईमा बच्चा जन्माउनेछन्।उनीहरु एकसाथ आमा बन्ने भएका छन् । ‘पालैपालो गर्भवती भएको कुरा सुनाउन थाल्यौ।’ नर्स इरिन ग्रेनरले भनिन्,‘प्रत्येक पटक प्रत्येक दिनजस्तै यस्ता खबर सुन्दा हामीहरु खुशी साथै अचम्मित भएका थियौं।’
मेइन अस्पताले ९ जना नर्सलाई सामाजिक सन्जालमा शुभकामना दिएको छ। साथै सबैले सामूहिक तस्बिर समेत खिचाएका छन् । अस्पतालले आफूहरुसँग पर्याप्त नर्स भएका कारण ढुक्क भएर आमाको भूमिका निर्वाह गर्न नर्सहरुलाई शुभकामना सन्देश जारी गरेको छ । अस्पतालले भनेको छ,‘चिन्ता नलिनु, हामीसँग त्यसको उपाय छ।’ एकै युटिनका नर्स भएका कारण अस्पताललाई अप्ठ्यारो हुने अनुमान गरिएको थियो।